မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် ပြီးမြောက်ချိန် ချင်းတောင်- ကလေး- မုံရွာ- မန္တလေး- ရန်ကုန်ခရီး? - Yangon Media Group
မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် ပြီးမြောက်ချိန် ချင်းတောင်- ကလေး- မုံရွာ- မန္တလေး- ရန်ကုန်ခရီး?
ကလေး ဧပြီ ၁၈
ကလေးခရိုင် ကလေးမြို့၏မြန်မာ့ရိုးရာမဟာအတာသင်္ကြန်ပြီးမြောက် ချိန်မြန်မာသင်္ကြန်ကာလ ကလေး- မုံရွာ- မန္တလေး-ရန်ကုန်ယာဉ်လိုင်း များပုံမှန်ပြေးဆွဲမှုရပ်နားရာမှ ဧပြီ ၁၈ရက်(မြန်မာနှစ်သစ်ကူး နှစ်ဆန်း ၂ ရက်နေ့)မှစတင်ကာမော်တော်ယာဉ်လိုင်းများပြန်လည်ပြေးဆွဲ၍ခရီးသွားပြည်သူများဖြင့် ခရီးသွားဦးရေများပြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကလေးမြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များသို့ ယာဉ်လိုင်း ပေါင်း ၅၀ ကျော်မှယာဉ်အစီးရေ ၁၀၀ နီးပါး နေ့စဉ်ပြေးဆွဲလျက်ရှိကြောင်း၊ကလေးမြို့ကိုအခြေပြုပြေးဆွဲ သည့် ခရီးသည်တင်ကားများသည် ဧပြီလဆန်းပိုင်းသင်္ကြန်မတိုင်မီ ကာလမှအစပြု၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဖြင့်ခရီးသွားလာမှုများပြားကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာအတာသင်္ကြန်အပြီး၌လည်းကားလက်မှတ်များကြို တင်ဖြတ်ထားမှုတို့ကြောင့်ခရီးသည်ရရှိမှုများပြားကြောင်း၊ တက်လမ်းအဆင့်မြင့်ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းမှာ မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြေးဆွဲကြောင်းကလေးမြို့ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တ ကျပြေးဆွဲရေးကော်မတီဥက္ကဌဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
“ သင်္ကြန်မတိုင်မီကာလနဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်အပြီးမှာတော့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ၊ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ဒေသနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ချင်းတောင်- ကလေး- မုံရွာ- မန္တလေး- ရန်ကုန်ပြေး ဆွဲတဲ့ကားတွေနှစ်တိုင်းခရီးသည်ပြည့်တာများတယ်။ ကားလက်မှတ်တွေ ကြိုဖြတ်နေရတယ် ” ဟုမိမိဒေ သသို့ သင်္ကြန်ရုံးပိတ် ရက် အတွင်း ခေတ္တပြန်ရောက်သည့်ခရီးသွားပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကလေး- မုံရွာ- မန္တလေးဆက်သွယ်ရာတွင် နွေဦးကာလ ချင်းတွင်းမြစ်ရေနည်းပါးမှုကြောင့် ချင်းတွင်းရေကြောင်းမှခရီးသွားလာသူ နည်းပါးပြီး ကလေးမြို့အခြေပြုကားလမ်းမှသွားလာသူများပြားကြောင်း၊ ကလေး- ကလေးဝ- ယာကြီးလမ်းနှင့် ကလေး- ကလေးဝ-မဟာမြိုင် ရေဦး- မန္တလေးလမ်းတို့မှာလည်း သင်္ကြန်ကာလမိုးအနည်းငယ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းကြောင်းစိတ်မချရကြောင်း၊ ကလေး-ဂန့်ဂေါပတ်လမ်း မှာ လမ်းကြောရှည်လျားသော်လည်း ရာသီမရွေး တောင်ပြိုလမ်းပျက်စီးမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ခရီးသည်တင်မော်တော် ယာဉ်လိုင်းများ အသွားအလာများပြားလျက်ရှိကြောင်း High Class အဆင့်မြင့်ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ပြောပြ ချက်အရသိရသည်။
ကျွဲ၊ နွားရောင်းပွဲဈေး ကန့်ဘလူမြို့၌ ဖွင့်လှစ်
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထီဖွင့်ပြီး ရှစ်ရက်အကြာမှ ထွက်ပေါ်လာ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာပေးရေး ဆွေးနွေး
ရေဆင်းချိုးလျှင် ရောဂါဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းသည် ဟုဆိုကာ ရေးမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းရွာချောင်းကိ?
မြဝတီမြို့ရှိ ပန်းခြံတစ်ခုမှ အလံတိုင် ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးခံရ၍ ဖျက်ဆီးသူများကို စုံစမ်းဖော်